10ka Oktoobar waa maalin Taariikhda Soomaalida u ah ayaandaro
Garabka Jowhar oo ah taageerayaasha Col. Cabdullahi Yusuf ayaa isku diyaarinaya iney u dabaaldegaan maalintii dibeda laga soo doortay Col. Cabdullahi Yusuf oo ku began 10ka Oktoobar. Faragelintii IGAD ay ku soo xushay hogaamiye kooxeedka Cabdullahi Yusuf ayey taageerayaashaas ay isku heybta yihiin ee ku sugan Jowhar u arkaan guul ay ka gaareen dhinaca siyaasada kadib markii Itoobiya ay gacan ka geysatey xukun ku soo celinta dadka looga tirada badan yahay dalka. Waxey inta badan dadweynaha Soomaaliyeed u arkaan maalintaas iney tahay nasiibdarro iney gasho taariikhda ummadda Soomaalida u dhigan.
Doorashadii Col. Cabdullahi waxba kama aysan badelin dhaqankiisa ku saleysan hogaamiye kooxeednimada. Qaramada Midoobey ayaa ku diidey codsigii uu ku dalbaday in laga qaado cunaqabateynta saran dalka Soomaaliya xili uu hadda hub uga soo uruursanayo dalalka Yeman iyo Itoobiya. QM ayaa weli u aragta Col. Cabdullahi Yusuf inuu yahay hogaamiye kooxeed aan nabada jecleyn oo ku mashquulsan abuurid xaalad colaadeed iyo dagaal ku baraarujinta kooxaha ka soo horjeeda oo aan ku raacsaneyn xaga fekerka. Madaxweynaha Gollaha Amaanka ee QM Mr. Mihnea Motoc ayaa shir jaraa’id oo uu qabtay maanta ku sheegay inay la dhacsan yihiin sii xoojinta cuna qabateynta hubka ee saran dalka Soomaaliya.
Col. Cabdullahi wuxuu geliyey dadaal badan hogaamiye kooxeedka Maxamed Dheere oo ay horay shirko ugu ahayeen ka ganacsiga dadka Soomaaliyeed oo ay argagixiso ahaan gacanta ugu geliyaan cadowga Itoobiya. Xaqdarra ay ku heshiiyeen awgeed waxey maanta Jowhar qarka u saran tahay ama in Maxamed Dheere laga masaafuriyo ama in Col. Cabdullahi uu isaga tago oo u guuro gobolka Bakool. Maxamed dheere oo la dabageliyey Cabdirisaaq Juriile ayaa waxaa u yeertay Itoobiya si arrinta ka jirta Jowhar loogu helo xal. Juriile ayaa loo sii dhiibey qoraalo uu si gooniya u bixinayo faahfaahintooda, isagoo ka tala dhiibanaya sida ku haboon oo Maxamed Dheere dhaqankiisa laga yeelayo.
Garoonka Jowhar oo la balaariyey, qarashka ku baxeyna ay Itoobiya lug ku lahayd si dayaaradaha dagaalka ee Itoobiya ay qeyb uga qaataan dagaalka lagu qaadayo Muqdisho, garabka Col. Cabdullahina uu u helo saanad iyo hub joogtaa, ayaa la filayey in lagu aamusiyo Maxamed Dheere iyo qaraabadiisa gaarkaa inay ka helaan dhaqaale ku dhiirisa iney ku qancaan waxtarka ay ka helayaan garabka Cabdullahi joogitaanka ay ku degan yihiin degmada Jowhar iyo adeegyada ay u sameynayaan ciidamada Bari ka yimid oo ku xareysan xerooyinka loogu talagalay maleeshiyooyinkaas.
Garabka Jowhar ayaa Maxamed Dheere u arka nin ka soo habaabay kooxaha ay isku heybta yihiin ee ka soo jeeda Muqdisho kana soo horjeeda siyaasada Col. Cabdullahi Yusuf. Maxamed Dheere ayaa laga ilaaliyey inuu xogta sare ee ka socota hogaanka dalka inuu lug ku yeesho, waxaana lagu xadidey talada maamulka Jowhar. Maxamed Dheere oo aan wax jagaa ka heyn maamulka Col. Cabdullahi ayaa qiil looga dhigay in laga fogeeyo sirta sare ee ka socota aqalka Col. Cabdullahi. Maxamed dheere oo colaad weyn loogu qaaday soo dhaweynta uu u fidiyey garabkaas, ayeysan ka dhaadhicin gurigiisa in lagu shiro haddana qorshaha laga qarsado. Taasna waxey ku dhalisay inuu isaguna si dadban uu u muujiyo dhaqan cabsi gelin leh oo uu ku hayo dadka ku fekerka ah Col. Cabdullahi Yusuf ee aan laga wargelin magacaabidooda.
Maxamed Dheere ayaan u arkin iney waxba soo kordhin karto dadaalka ay madaxda Itoobiya ku dooneyso in Maxamed Dheere loo magacaabo jago haddiba ay kooxda ku wareegsan Col. Cabdullahi ay markasta u keydsan tahay il ay isaga ilaalinayaan isaga oo aan ku heyb ahayn, cabsina ay ka qabaan mustaqbalka in laga yaabo dagaalka lala damacsan yahay dadka ku hebta ah inuu fashiliyo xili howlgalkeeda gudaha looga jiro. Talada Itoobiya aya hadda u badan inaan la gaarin wakhtigii laga maari lahaa hogaamiye kooxeedka Jowhar, waxaana laga yaaba in ninkaas lagu soo qanciyo u magacaabida jagada madaxweyne ku xigeenka si bal uu talo ugu yeesho arrimaha ka socda aqalka Col. Cabdullahi.
Itoobiya ayaa aad u raacsan kooxda ku fekerka ah Col. Cabdullahi Yusuf oo hab xigto ahaan ugu wareegsan korneylka, waxaase u muuqata inaan weli la gaarin markii laga maarmi lahaa hogaamiye kooxeedka ku lifaaqan siyaasadooda, kaas oo ka soo jeeda beelaha ay dagaalka siyaasadeed kala dhaxeyso Col. Cabdullahi. Waana taas mida keentay in loo yeero Juriile oo ka siyaasad dabacsan Col. Cabdullahi, laakiin ka masiibo badan marka la qorsheynayo shax daboolan oo aysan muuqan waxyeeladeedu inta laga gaarayo wakhtigii loogu tala galay iney qaraxdo.
Itoobiya oo ah cadowga Soomaaliyeed ayaa u dhisatay Garabka Jowhar iney si dadban ugu xukunto dalka Soomaaliyeed, taasna waxaa kuu cadeynaya sida loogu yeeranayo madaxda garabkaas si loogu soo dhiibo qorshayaasha loo soo diyaariyey iney fuliyaan, loogana dhageysanayo kuwa iyagu ay ka soo diyaariyeen wadaniyiinta dalka u dhashay ee ka soo horjeeda siyaasada Itoobiya iyo kooxaha ay wadato oo ka kooban hogaamiye kooxeedyada. 10ka Oktoobar ayey u heystaan dadka ku heybta ah Col. Cabdullahi maalin weyn oo ay dib ula soo noqdeen xukunka dalka Soomaaliyeed. Maalintaas waa maalin mugdi u ah taariikhda Soomaalida, waxeyna tahay maalin cadowga Itoobiya uu ku faraxsan yahay inuu Soomaaliya ka hirgeliyey siyaasadiisa abaareysa in Soomaalida lagu mashquuliyo dagaal iyo iney u taliyaan hogaamiye kooxeedyo ka talo qaata Itoobiya, sidaasna ay Soomaalidu uga harto horumarka ay ku gaari lahayeen siyaasad degan oo dalka gaarsiisa madaxbanaani buuxda oo dhinac walba leh.